My nkuchi nwanne Stig e enen ke Annerstads ụka afọ anọ gara aga. M ga-echeta ya na nkwenye ma m chọrọ iji gosi na m. Ihe mere ihe mere Stig enen onwe ya m na-amaghị ma na m chọrọ enen, ọ bụghị iji nweta ụfọdụ kwere omume onyinye, ma ọ bụ nnọọ n'ihi a ezigbo mmasị m.
Mgbe m leghachiri anya azụ ná ndụ m, m na-aghọta na m nkwenye mmasị n'ihi ime ihe n'eziokwu na nke miri emi search maka Chineke. E Disbanded na obi m.
Nkwenye ozizi ndokwa site Annerstads ụka nke e nwere site pastọ. Izi bụ na a ụlọ nke abụọ nke ụlọ nke parish ụlọ. Anyị bụ ndị na ma eleghị anya, 20 na-eto eto na ma ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ ndị na-agụ.
Ma m hụrụ na nkwenye ihe ndị siri ike na ihe siri ike. Anyị na-ama na-agụ n'olu dara ụda a akwụkwọ banyere okwukwe nke ndị Kraịst na aghọtaghị m ihe ọ bụla nke. M na-echeta ihe ọ bụla taa ihe mgbe a kụziiri anyị catechist. Eleghị anya, anaghị m echeta ya ma na nkwenye ụbọchị, nke bụ ụbọchị tupu m ụbọchị ọmụmụ.
Ma nkwenye dị ka ndị dị otú ahụ nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ emetụta m dị ka onye. M ka otu agadi Chris. Nke a gosipụtara ihe omume dị nnọọ tupu anyị na-aga n'ime ụka ma na-egosi anyị. Onye nchụàjà na ndị niile na catechist gbakọrọ na a obere ụlọ tupu nkwenye.
Mgbe m mkpa aga ime ụlọ ịwụ, nke m mere. Mgbe m bịara azụ, m splashed mmiri na-acha ọcha chemise, niile catechist mmanya, mgbe m sara ya aka. Onye kwuru nke a, ma m chere na m na-emechi ya mgbe m pee, otú ahụ ka m na-etinye na a ọma oké expletive tupu onye nchụàjà na ndị niile na catechist. The ozi kwuru m ọrịa na-họọrọ okwu, na m na-n'ijuanya pionröd m. Ma dị ka anyị wee banye chọọchị na egosi n'obu enweghị nsogbu ọ bụla.
Mgbe anyị gara n'ime chọọchị m agbatị m na nganga ẹkenịmde na Bible na ukwe akwụkwọ. Ma ihe e kwuru n'oge nkwenye, m na-enweghị echiche.
M na-eche m ezigbo mmasị na nkwenye bụ na Chineke chọrọ m. Ọ bụ ngosipụta nke m na m rịọrọ Chineke na m eto eto afọ. Ma dịghị mgbe m maara na ọ bụ Chineke.
Mgbe m leghachiri anya azụ ná ndụ m, m na-ahụ ihe omume ndị ọzọ mgbe Chineke chọrọ m. Ọ pụrụ ịbụ yiri obere ihe, nke m ugbua gwara gị banyere ụfọdụ indenna akwụkwọ, ma na e nwere ụfọdụ ihe ndị na-na mberede nwuru dị ka ìhè na Chineke dị adị nakwa na ọ hụrụ m.
Mgbe e mesịrị, m ga-aghọta na Chineke abụghị Chineke dị ka Santa Claus onye egwu ghara inye onyinye ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ na-enwebeghị ụdị, ma a Chineke bu onye nwere onye kachasị elu n'anya obere mmadụ. Nke a na-ahụ n'anya Chineke nyere n'oge ruo n'oge na-eche a obere chịkwaa ejighị n'aka ike emegbu nwa na-enweghị, ma ọ maghị onye ọ bụ na kụrụ aka ya na-eto eto obi ụzọ
M bụ ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị na onye nchụàjà mbụ a frikyrkopastor. Ya mere, o kwesịrị nwere ihe ọmụma nke otú a ga-azọpụta ma a Christian, ma ọ bụghị ịgwa a na-anyị. Gịnị ma ọ bụrụ na o mere ya. Mgbe ahụ, m nwere ike ugbua a zọpụtawo wee ndụ m nile gbanwee. Ọtụtụ sorrows na nhụsianya gaara ezere ná ndụ m. N'eziokwu, o hotara ịtụnanya Bible amaokwu John 3 na nke 16 anyị biblars ekpuchi. The ederede nke amaokwu ahụ bụ:
"N'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya nke na o nyere Ọkpara ọ mụrụ naanị, na onye ọ bụla nke kwere na ya ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi."
Ma o hotara n'amaokwu ahụ na Bible, m chọpụtara na mgbe ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị, na ọ na-gwara ma ọ bụ kọwara amaokwu anyị. Nkwenye bụ otú bụghị zọpụta m.
Mgbe m bụ nwata, ọ pụrụ mgbe ụfọdụ hụperetụ site ọchịchịrị a na-echetara nke Chineke. Aghọtaghị m ya mgbe ahụ, ma mgbe m dị ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị na retrospect na ike anya azụ ná ndụ m, m nwere ike ịhụ ya n'ụzọ doro anya.
Ihe dị otú ahụ nwere ike na-aga ogologo n'ime obi m bu akwụkwọ ịma ọkwa na ezi nsturmotiv. Dị ka ihe atụ, a anyanwụ n'azụ osisi. Na otu akụkụ Akwụkwọ Nsọ. M nwere ike mgbe ụfọdụ na-abịa gafee dị otú ahụ akwụkwọ ịma ọkwa, ihe atụ, na parish ulo. Mgbe m na-agụ amaokwu Bible na ha, m jukwara ya anya mgbe ihe ike na ha nwere ike ịnwe. Ha dị ndụ ma na-nwere ike na-ekwu okwu nke oma n'ime obi m. M echeta nke ọma otu oge dị otú ahụ otú anya na anya na-achọ na posta. Ọ mere na ọtụtụ ugboro na n'oge dị iche iche na Chineke gwara m okwu na mere onwe mara ndị a dị iche iche. Ma dịghị mgbe m maara na ọ bụ ya ruo mgbe ọtụtụ afọ mgbe e mesịrị.
Ingrid Ljunggren dị ezigbo mma izi depụtara ihe. Ọtụtụ mgbe, ọ gwara m banyere onwe-aghọta ihe. Ọ dị mfe na-ege ntị ya ma na-na ihe o kwuru na-akụziri.
N'otu ebe na okpukpe m ga-echefu. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ Onye Kraịst, ma ọ gwara m na ya na di ya ụmụ ọhụrụ dara ọrịa ma n'ụlọ ọgwụ. Mgbe ahụ, ha kpegaara Chineke ekpere maka ụmụ ha bụ ndị nnọọ mma. Ha wee zaa ekpere. Nke a ọ gwara klas ahụ dum. M nọdụrụ nwayọọ ma gee ntị na eju ke okpokoro mi.
Ụlọ akwụkwọ e gụnyere na anyị ga prya ndusụk ini ke ọ bụla ọkara afọ agụmakwụkwọ dị iche iche ebe ka a hụperetụ nke ụwa nke na-arụ ọrụ na ma eleghị anya, na-a hum nke ihe anyị ga-ahọrọ maka klas nke itoolu, nke m doro anya nnọọ ike ịmata. Kemgbe m bụ artistically mmasị m ozugbo prya ngalaba ụlọ ahịa Tempo na Ljungby ka a decorator. Ha nwere ha onwe ha decorators ọrụ onye mere ihe ịrịba ama. N'ụzọ dị mwute, m mmasị na ya bụghị otú ezi na ọ bụ ike buru n'uche. Ọ bụ eleghị anya n'ihi na m chịkwaa na-ejighị n'aka ụzọ.
N'ihi na nke m na ndenye aha na mmasị na nkà bụ okwu nke ọzọ ọkara afọ agụmakwụkwọ na m ga na-prya a izu na a ule akara na a Christian mahadum ke Helsingborg. Psyokonsulenten jisiri m na e a izu. M na-echeta na m nwere na-agba ịnyịnya na ụgbọ ala ala Helsingborg, ọ bụ ezie na m bụ nchegbu banyere m ogologo njem, ma ọ gara nke ọma, wee bịa a nkụzi si ụlọ akwụkwọ na ẹmende m. M nọ n'ụlọ ya na ezinụlọ ya.
M ghọtara na ha bụ ndị Kraịst, ma m na-amaghị ihe ọ pụtara. Dịghịkwa ha kọwara ihe ọ bụla banyere nke a ka m.
An mgbede na mahadum, m guzo na a ìgwè ụmụ akwụkwọ na-ele ụfọdụ football egwuregwu. Mgbe m jụrụ otu onye n'ime ha ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi nke a ka akwụkwọ ahụ bụ Christian. Mgbe ahụ, m nwere ogologo ịkọwa ya nke ọ kọwara ndị na-Kraịst. M nọ na a Christian gburugburu ebe obibi, ma ha anụghị ihe ọ bụla banyere Jizọs. Nso ma dị nnọọ anya ...
N'ụlọ m nkuchi n'ụlọ, m chọpụtara na a obere ọcha Gideon Bible na tucked na keesi akwukwo na bred. Amaghị m onye natara ya. Ma eleghị anya, ọ bụ m nkuchi nwanne. M nwere ike na-echeta na ọ bụ nke m. Ikekwe nwanne m nwoke nwetara ya mgbe godeonierna ekesa Bible New Testament in a akwụkwọ na klas nke ọ na-arahụ na ya. Gidroniter a na-akpọ maka inye si Bible n'etiti snmst n'ụlọ akwụkwọ na hotel ụlọ na ụlọ mkpọrọ. Ha ewerewo aha mgbe Gideon na Old Testament.
M dina na aja aja sofa na parlor maka ịgụ. Ọ bụ otu ihe ahụ n'ihe ndina m na nānọdu mgbe, akwụkwọ akụkọ obodo ahụ a akụkọ banyere m na m cartoons a afọ ole na ole gara aga.
M malitere ịgụ na Matiu gospel na e dị blown pụọ site na ihe m na-agụ. Lee ihe obi ụtọ ọ bụ! Apụghị m ịkwụsị.
M na-agụ banyere Jizọs na otú e kpogidere na na Chineke kpọlitere ya ọzọ si na ndị nwụrụ anwụ na n'ụbọchị nke atọ. The dum omume tụrụ na-ese n'elu na uche m na m nwere ike n'ezie ịhụ ya.
The okwu na-ebi dị ka m na-agụ. Ha zutere nri na obi m. Ọ bụghị nanị na ihe ndị nkịtị akụkọ.
Soro MY Serial na undesired
Nke a Oghere Usoro bụ ndụ m akụkọ site na nwata n'ihu. M na-agwa ọtọ na-hoo. A ọtụtụ M mgbe gwara gị banyere mgbe mbụ. Aha ụfọdụ akụkọ bụ nru ugha.
Vecka 17, onsdag 24 april 2019 kl. 08:45